ပဋ္ဌာန်းကို နားမလည်ပဲရွတ်ရင် အစွမ်းထက်မထက် နေရာရွေးပြီးရွတ်သင့်/မသင့်(ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ အဖြေ ) – Myanmar Update News
မေး။ ပဋ္ဌာန်းဂါထာများရွတ်ဆိုရင်အနက်အဓိပ္ပါယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုရင် အစွမ်းထက်ပါသလား ? မေး။ ပဋ္ဌာန်းကိုနေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်တယ်၊ နေရာမရွေးပဲရွတ်ရင် အနှောင့်အယှက်အပေးခံရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ? ဘာကြောင့်လဲ။ ရှင်းပြပေးတော်မူပါဘုရား။
ဖြေ။ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်များလို့ သုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်။ ဂါထာဆိုတာက သံစဉ်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ မင်္ဂလသုတ်တို့ မေတ္တာသုတ် တို့လို ရေးထားတဲ့အရာတွေ ဖြစ်တယ်။ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကျတော့ စုန္နိယ လို့ ခေါ်တာပေါ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ရွတ်ဆိုတာ အနက်အဓိပ္ပါယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုရင်ရော အစွမ်းထက်ပါသလား ဆိ်ိုရင် အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာ အစွမ်းထက်ချင်လို့ ရွတ်တာမျိုး။
ဘုရားရဲ့တရားတော်က အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအစွမ်းရှိတုန်းဆို မြတ်စွာဘုရား တရားတော်တွေကို ကြားနာပြီးတော့ မြတ်မြတ်န်ုးနိုး နေကြတဲ့အထဲမှာ လူတွေသာမကဘူး နတ်ဗြဟ္မာတွေလည်း ပါတယ်ပေါ့အဲတော့ ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုရွတ်ဆ်ုပြီဆိုရင်နတ်ဗြဟ္မာတွေကစိတ်ဝင်စားပြီစတော့ သူတို့လာတဲ့အခါမှာ တခြားမကောင်းဆိုးရွားတွေကဖယ်ရှားသွားကြတယ်။
တန်ခိုးရှိတဲ့နတ်တွေကလာရင် တန်ခိုးမရှိတဲ့နတ်တွေက ဖယ်ရှားရလို့ ဒုက္ခပေးမယ့်ဟာတွေ မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ အဲလိုတော့ ဖြစ်နိူင်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းကို မြတ်မြတ်နိူးနိူး နာယူဖူးကြတဲ့ နတ်တွေဟာ နတ်တို့နာချင်စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့အရှိန်အဝါတွေပေါ့ ဥပမာမယ် ရာထူးကြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်လာတဲ့အခါ အလိုအလျောက် သူ့ရဲ့အရှိန်အဝါဆိုတာ ရှိတယ်ပေါ့နော်
အဲသလို အရှိန်အဝါမျိုးဖြစ်တယ်လို့လဲ ဆိုနိူင်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းလည်း ရှိတယ်ပေါ့ ရင်ထဲ နှလုံးထဲမှာ ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင် ဘုရားကို ပူဇော်မယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေရဲ့လေးနက်မှန်ကန်မှုကြောင့် နားမလည်သော်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ ရှိတယ်လို့ ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။
ဘာကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်တာတုန်းဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာ ကြောင်းကျိုး ဆီလျော်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ တရားတော်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်။ထိုစစ်မှန်တဲ့တရားတော်တွေကို နတ်ဗြဟ္မာတွေက လိုလိုလားလားနှစ်သက်ကြတာဖြစ်သောကြောင့် ရင်ထဲ နှလုံးထဲမှာ ပီတိဖြစ်နိူင်တာ ဖြစ်သောကြောင့်။ကုသိုလ်တရားဖြစ်နိူင်တာ ဖြစ်သောကြောင့် ကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးန်ူင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိတော့ ရှိတယ် လို့ ဒီလိုပဲ မှတ်သင့်တယ်ပေါ့။
မေး။.. နေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်/မသင့် ဖြေ။. ပဋ္ဌာန်းကို နေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်တယ်။ နေရာမရွေးပဲ ရွတ်ပါက အနှောင့်အယှက်ပေးခံရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား
တချို့ပြောဆိုကြတာတွေကို ဘုန်းဘုန်းလည်း ကြားဖူးပါတယ်။ဒါက ဖြစ်နိူင်တာတစ်ခုကတော့ ဒီလိုပေါ့ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကို ဘုရားတရားတော်တွေကို မကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားမှာ ရွတ်တယ် ဆိုပါစို့။ ရွတ်မိဆိုရင် ဆန့်ကျင်ဘက်တော့ ဖြစ်နိူင်တယ်ပေါ့ အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ဆိုတာ အဲဒါမျိုးပေါ့။
ဥပမာမယ် ပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်နေတယ် အသံချဲ့စက်ကြီးနဲ့ရွတ်လို့ နားမခံနိူင်လို့ ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေလည်း ရှိတာပဲ လူထဲမှာတောင်မှ။ အဲဒါကတော့ အသံကျယ်လို့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးပေါ့နော် အဲသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို မကြည်ညိုလို့ ဘာသာချင်းမတူလို့ မုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လူသားက အနှောင့်အယှက်ပေးက တစ်မျိုး။
လူတွေမမြင်ရတဲ့သတ္တဝါတွေထဲမှာလည်း ဒီလိုမကြိုက်တဲ့ သတ္တဝါတွေ ရှိနိူင်တယ်။ နတ်တွေမကြိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေက သူတို့ ဒါရွတ်ရင် အနေအထိုင်ခက်တယ်။ စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင် အနှောင့်အယှက်ပေးန်ူင်တယ် ပေါ့ဒါကြောင့် ပဋ္ဌာန်းရွတ်တော့မယ်ဆိုရင် မေတ္တာပို့ပြီးတော့ အားလုံးလက်ခံနိူင်လောက်အောင် မေတ္တာစိတ်နဲ့ရွတ်နိူင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်။
ဖြေ။ ကွာခြားတယ်။ အဓိပ္ပါယ်နားမလည်ပဲရွတ်ဆိုတာကတော့ မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ည်ုတဲ့စိတ်နဲ့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင် သဒ္ဓါပဲ ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ အနက်အဓိပ္ပါယ်နားလည်ပြီး ရွတ်ဆိုရင် ပညာလည်း ဖြစ်တာပေါ့ ပိုပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ် နားလည်လိုက်လို့ရှိရင် အသိပညာ ပါသွားတယ်။
‘အော် ဘုရားဘာတွေရှင်းပြနေတယ်’ဆိုတာ နားလည်သည့်အတွက်ကြောင့် သဒ္ဓါရော ပညာရော နှစ်ခု စုံသွားတယ်။ အဲတော့ သိပြီးတော့ရွတ်တာ ပိုပြီးတော့ တန်ဖိုးကြီးတယ် လို့ ပြောရမှာပေါ့ ။လေးစား ကြည်ညိုစွာဖြင့် ကုသိုလ်ပွားစေရန် ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
မေး။ ပဋ်ဌာနျးဂါထာမြားရှတျဆိုရငျအနကျအဓိပ်ပါယျနားလညျမှုမရှိပဲရှတျဆိုရငျ အစှမျးထကျပါသလား ? မေး။ ပဋ်ဌာနျးကိုနရောရှေးပွီး ရှတျသငျ့တယျ၊ နရောမရှေးပဲရှတျရငျ အနှောငျ့အယှကျအပေးခံရတယျဆိုတာ ဟုတျပါသလား ? ဘာကွောငျ့လဲ။ ရှငျးပွပေးတျောမူပါဘုရား။
ဖွေ။ ပဋ်ဌာနျးပါဠိတျောမြားလို့ သုံးသငျ့တယျပေါ့နျော။ ဂါထာဆိုတာက သံစဉျနဲ့ဖှဲ့ထားတဲ့ မင်ျဂလသုတျတို့ မတ်ေတာသုတျ တို့လို ရေ ထားတဲ့အရာတှေ ဖွဈတယျ။ပဋ်ဌာနျး ပါဠိတျောကတြော့ စုန်နိယ လို့ ချေါတာပေါ့ပဋ်ဌာနျးပါဠိတျောရှတျဆိုတာ အနကျအဓိပ်ပါယျနား လညျမှုမရှိပဲရှတျဆိုရငျရော အစှမျးထကျပါသလား ဆိုရငျ အစှမျး ထကျတယျဆိုတာ အစှမျးထကျခငျြလို့ ရှတျတာမြိုး။
တရားတျောတှကေတော့ လူတှအေတှကျ တရားစှမျးထကျဖို့ရှတျတာတော့ မဟုတျဘူး။ ဒါရှတျရငျ အစှမျးထကျတယျ ဆိုတာ တနျ ခိုးရှိတယျ လို့ ဒီလိုဆိုလိုတာ မဟုတျဘူးနျော။အနကျအဓိပ်ပါယျနားမလညျပဲရှတျဆိုရငျရော ကုသိုလျရပါသလားဒီလိုပဲ မေးသငျ့တာပေါ့နျော။
ဘုရားရဲ့တရားတျောက အစှမျးရှိတယျဆိုတာ ဘယျလိုအစှမျးရှိတုနျးဆို မွတျစှာဘုရား တရားတျောတှကေို ကွားနာပွီးတော့ မွတျမွတျနျုးနိုး နကွေတဲ့အထဲမှာ လူတှသောမကဘူး နတျဗွဟ်မာတှလေညျး ပါတယျပေါ့အဲတော့ ဘုရားဟောတဲ့တရားတျောကိုရှတျဆျုပွီဆိုရငျနတျဗွဟ်မာတှကေစိတျဝငျစားပွီစတော့ သူတို့လာတဲ့အခါမှာ တခွားမကောငျးဆိုးရှားတှကေ ဖယျရှားသှားကွတယျ။
တနျခိုးရှိတဲ့နတျတှကေလာရငျ တနျခိုးမရှိတဲ့နတျတှကေ ဖယျရှားရလို့ ဒုက်ခပေးမယျ့ဟာတှေ မရှိတော့ဘူးပေါ့နျော။ အဲလိုတော့ ဖွဈနိူငျတယျ။ မွတျစှာဘုရားပဋ်ဌာနျးကို မွတျမွတျနိူးနိူး နာယူဖူးကွတဲ့ န တျတှဟော နတျတို့နာခငျြစိတျရှိတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့အရှိနျအဝါတှပေေါ့ ဥပမာမယျ ရာထူးကွီးတဲ့ လူတဈယောကျလာတဲ့အခါ အလို အလြောကျ သူ့ရဲ့အရှိနျအဝါဆိုတာ ရှိတယျပေါ့နျော
အဲသလို အရှိနျအဝါမြိုးဖွဈတယျလို့လဲ ဆိုနိူငျတယျ။ မွတျစှာဘု ရားရဲ့တရားတျောကို ရှတျဖတျပူဇျောတယျဆိုတဲ့ ဒီကုသိုလျကောငျး မှုရဲ့အစှမျးလညျး ရှိတယျပေါ့ ရငျထဲ နှလုံးထဲမှာ ပီတိဖွဈပွီးတော့ရှတျဆိုမယျဆိုရငျ ဘုရားကို ပူဇျောမယျဆိုရငျ မွတျစှာဘုရားဟောတဲ့တရားတျောတှရေဲ့လေးနကျမှနျကနျမှုကွောငျ့ နားမလညျသျော လညျး အကြိုးသကျရောကျမှုတော့ ရှိတယျလို့ ဒီလိုပွောရမှာပေါ့နျော။
ဘာကွောငျ့အကြိုးသကျရောကျတာတုနျးဆိုတော့ မွတျစှာဘုရားဟောတဲ့တရားတျောတှဟော ကွောငျးကြိုး ဆီလြျောပွီး စဈမှနျတဲ့ တရားတျောတှဖွေဈသညျ့အတှကျကွောငျ့။ထိုစဈမှနျတဲ့တရားတျောတှကေို နတျဗွဟ်မာတှကေ လိုလိုလားလား နှဈသကျ ကွတာဖွဈသောကွောငျ့ ရငျထဲ နှလုံးထဲမှာ ပီတိဖွဈနိူငျတာ ဖွဈသောကွောငျ့ ကုသိုလျတရားဖွဈနိူငျတာ ဖွဈသောကွောငျ့ ကုသိုလျရဲ့ကောငျး ကြိုးခမျြးသာပေးနျူငျတဲ့အစှမျးသတ်တိတော့ ရှိတယျ လို့ ဒီလိုပဲ မှတျသငျ့တယျပေါ့။
မေး။.. နရောရှေးပွီး ရှတျသငျ့/မသငျ့ ဖွေ။. ပဋ်ဌာနျးကို နရောရှေးပွီး ရှတျသငျ့တယျ။ နရောမရှေးပဲ ရှတျပါက အနှောငျ့အယှကျပေးခံရတယျဆိုတာ ဟုတျပါသလား
တခြို့ပွောဆိုကွတာတှကေို ဘုနျးဘုနျးလညျး ကွားဖူးပါတယျ။ဒါက ဖွဈနိူငျတာတဈခုကတော့ ဒီလိုပေါ့ ပဋ်ဌာနျးတရားတျောတှကေို ဘုရားတရားတျောတှကေို မကွညျညိုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှနေားမှာ ရှတျတယျ ဆိုပါစို့။ ရှတျမိဆိုရငျ ဆနျ့ကငျြဘကျတော့ ဖွဈနိူငျတယျပေါ့ အနှောငျ့အယှကျပေးတယျဆိုတာ အဲဒါမြိုးပေါ့။
ဥပမာမယျ ပဋ်ဌာနျးတှရှေတျနတေယျ အသံခြဲ့စကျကွီးနဲ့ ရှတျလို့ နားမခံနိူငျလို့ ဆနျ့ကငျြတဲ့လူတှလေညျး ရှိတာပဲ လူထဲမှာတောငျမှ။ အဲဒါကတော့ အသံကယျြလို့ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈတယျဆိုတာ အဓိ ပ်ပါယျတဈမြိုးပေါ့နျော အဲသလိုမဟုတျဘဲနဲ့ မွတျစှာဘုရားကိုမကွ ညျညိုလို့ ဘာသာခငျြးမတူလို့ မုနျးတီးတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှကေ လူသားက အနှောငျ့အယှကျပေးက တဈမြိုး။
လူတှမေမွငျရတဲ့သတ်တဝါတှထေဲမှာလညျး ဒီလိုမကွိုကျတဲ့ သတ်တဝါတှေ ရှိနိူငျတယျ။ နတျတှမေကွိုကျတဲ့သတ်တဝါတှကေ သူတို့ ဒါရှတျရငျ အနအေထိုငျခကျတယျ။ စိတျဆငျးရဲတယျဆိုရငျ အနှောငျ့အယှ ကျပေးနျူငျတယ် ဒါကွောငျ့ ပဋ်ဌာနျးရှတျတော့မယျဆိုရငျ မတ်ေတာပို့ပွီးတော့ အားလုံးလကျခံနိူငျလောကျအောငျ မတ်ေတာစိတျနဲ့ရှတျနိူငျရငျပိုကောငျးတယျပေါ့နျော။
မေး။ အဲဒါဆိုလို့ရှိရငျ ပဌာနျးတှေ ဂါထာတှေ ဘုရားဂုဏျတျောတှေ ရှတျဆိုတာ အနကျအဓိပ်ပါယျနားလညျမှုမရှိပဲနဲ့ အနကျ အဓိပ်ပါယျသိပွီး ရှတျတာနဲ့ ကုသိုလျရတာခငျြးက အတူတူပဲလားဘုရား။
ဖွေ။ ကှာခွားတယျ။ အဓိပ်ပါယျနားမလညျပဲရှတျဆိုတာကတော့ မွတျစှာဘုရားကို ကွညျညျုတဲ့စိတျနဲ့ရှတျဆိုမယျဆိုရငျ သဒ်ဓါပဲ ဖွဈမှာပေါ့နျော။ အနကျအဓိပ်ပါယျနားလညျပွီး ရှတျဆိုရငျ ပညာလညျး ဖွဈတာပေါ့ ပိုပွီးတော့ အဓိပ်ပါယျ နားလညျလိုကျလို့ရှိရငျ အသိပ ညာ ပါသှားတယျ။
‘အျော ဘုရားဘာတှရှေငျးပွနတေယျ’ဆိုတာ နားလညျသညျ့အတှ ကျကွောငျ့ သဒ်ဓါရော ပညာရော နှဈခု စုံသှားတယျ။ အဲတော့ သိပွီးတော့ရှတျတာ ပိုပွီးတော့ တနျဖိုးကွီးတယျ လို့ ပွောရမှာပေါ့ ။လေးစား ကွညျညိုစှာဖွငျ့ ကုသိုလျပှားစရေနျ ပွနျလညျမြှဝပေါ သညျ။